Indlela yokuphucula i-website yami ye-SEO yamazwe ngamazwe?
Namhlanje, ihlabathi ledijithali lwakwiWebhu lamanje liya kuba lilonke. Ukususela kwi-Union Union esebenze nge-Intanethi ngokufikelela kwi-intanethi ngaphezu kwama-80%, nakwezinye iindawo eziphambili ezithe xa zinayo malunga ne-90% yommandla. Inani langempela linokuqiniseka ngakumbi eTshayina malunga nabasebenzisi abayizigidi ezingama-731 abemi, nangona kunjalo, emele isigxina soqikelelo lwabantu bonke - лежанка для таксы. Ewe, i-intanethi inikezela ngamathuba amaninzi ahlukeneyo kubanini bewebhusayithi abanomdla wokujongana nemida, kungekho zithintelo zenkcubeko. Ukuze uphumelele kule nto, nangona kunjalo, nawuphi na umrhwebi we-intanethi kufuneka abe nolwazi olubanzi lwabathengi abahlukeneyo kufuneka bawanikeze kuphela iimveliso okanye iinkonzo ezifunwa kakhulu.
Ngelo xesha, ukudala umxholo ofanelekileyo uya kuba ngumba omele uqwalaselwe. Ngokuqhelekileyo, unokucinga ukuba i-SEO yamazwe ngamazwe ithetha nje ukuba unomxholo onobunye ozayo kwiNgesi yemihla ngemihla. Kodwa imeko ayiyinto elula njengoko ingabonakala ekuqaleni. Le nto kukuba ukusebenzisa imigaqo-siseko ye-SEO yamazwe ngamazwe kuthetha ukugcina engqondweni nokusebenzisa kakuhle iindlela ezihlukeneyo zokubaluleka kunye nokuhlala kwendawo, exhaswa ngemibandela eninzi yobugcisa yokuphuculwa kokusesha. Ngaphezu koko, kwimbono yecebo lokuthengisa jikelele, ukusingatha i-SEO efanelekileyo yehlabathi jikelele ingaba ngumsebenzi opheleleyo kwaye uchitha ixesha. Ngezantsi ndiza kujonga ngokukhawuleza kwiiplani eziphambili ukuba ufumane amandla nge-SEO yomhlaba jikelele, kwaye ukwandisa ubuninzi bezoqoqosho malunga neprojekthi nganye ye-intanethi.
Hlulela kuzo zonke iimfuno zeengingqi
Ucinga ngehlabathi, uza kubona ukuba i-Google ngokwayo inezinhlobo ezahlukeneyo zomxholo kunye neendlela ezahlukahlukeneyo eziboniswe kumaphepha enkcazelo ye-injini (SERPs) kumntu ngamnye.Ndiyathetha ukuba umbuzo othize oyintloko ungabangela impendulo eyahlukileyo kwilizwe elizweni. Enyanisweni, i-Google ine-SERP yayo eyenzelwe yiminqweno yemimandla kwaye yenza okusemandleni ukulandela imimandla yomeleleyo yendawo yokufumana amava angcono kumsebenzisi kuwo onke amazwe. Ngokubhekiselele kumagama angundoqo kunye neerhafu zendlela, ngaphantsi kwemida ethile ivela kwiilwimi ezahlukeneyo kunye nezigama zendawo. Inxalenye ebalulekileyo yegama eliqhelekileyo lingahlala lilela ukufumana inguqulelo eyaneleyo. Oku kufuneka kuthathelwe ingqwalasela yokuqala kwaye ngokubalulekileyo, ngokuqinisekileyo ngokuqwalasela abantu basekuhlaleni, inkcubeko kunye nezinye izinto ezikhethileyo azikacaci ngokupheleleyo nakwii-webmasters ezinamava amaninzi.Oko kuthetha ukuba amazwe ahlukeneyo anokuhlala enokulindela okungenakulinganiselayo, nangona kwishishini elifanayo. Ukungaxeli imveliso yamazwe ngamazwe, ngokukodwa ngokubhekiselele kwinto abantu abafuna ukuyibona ngaphambi kokugqibela kwisigqibo sokuthenga.
Ukuphuhlisa isicwangciso sakho kwi-SEO yamazwe ngamazwe
Okokuqala, ukuphuhlisa isicwangciso se-SEO samazwe ngamazwe, masithathe ngokuthe tye-ukubeka kakuhle igama elingundoqo, ngokomzekelo waseTshayina, asithethi Eyona miphumo emihle nakwezinye iindawo emhlabeni jikelele. Ngenxa yoko, kuya kufuneka uqalise ukulungiswa kwe-SEO, uqalise ukudala umxholo ngokuchanekileyo kubaphulaphuli ozikhethile kwilizwe elilodwa. Ukwenza njalo, uya kuqonda iindlela eziphambili zengingqi zendlela, kunye nezinto ezizodwa kwiimpawu eziphambili ezifunekayo.Kwakhona, kuya kufuneka ufake izicelo ezithile zezobugcisa ze-SEO kwinqanaba lehlabathi lonke. Ndiyathetha ukuba uzakufuneka ungene emakhasini akho ewebhu ngee-tags ze-hreflang.
Uninzi ngokuqhelekileyo, iteksi ye-hreflang imele inxalenye yekhowudi esetyenziswa ngu-Google ukuchonga ilizwe elijoliswe kuyo, ngoko ke ulwimi kulwimi lakho lewebhu. Kuya kukunceda uqinisekiswe ukuba umxholo ofanelekileyo uboniswe kwindawo efanelekileyo ngokufanelekileyo. Ngokomzekelo, nangaphandle kolwimi lwesiSpeyin, kuya kubakho ukubaluleka kolwimi olubalulekileyo xa ulungelelanisa umxholo wakho waseSpain ngokwawo, kwaye umzekelo ukubonisa abasebenzisi base-Argentina. Ukusebenzisa i-hreflang tags kuya kunika amandla umxholo wakho ngamava angcono kumsebenzisi ngokungenelela ngakumbi ukubhalwa kweencwadi zakho.
Ngethuba elifanayo, ukusebenzisa i-tags ye-hreflang kunceda ukunciphisa usongelo olunokubakho lwezinto eziphindiweyo, utshele iGoogle ukuba umxholo othile ubhalwe kubameli beendawo ezahlukeneyo ngenjongo. Ukuqalisa ngokumakisha umxholo wakho, ndincoma ukusebenzisa ifomati yeSO 639-1 kuzo zonke iilwimi, ngokuhambelana nokuba nazo zonke iipempile zakho ziza kungabikho kwii-URL ze-URL, okanye zibahlule zibe ziincinci eziliqela kunye. Ngaphantsi kwezi zicwangciso ezi-3 eziphambili zokuqinisekisa ukuba umxholo wakho unamathele ngokuchanekileyo ngamathegi ngokuchanekileyo:
Fumana i-HTTP ye Header yakho nge-hreflang ithegi ukuqinisekisa ukuba iza nephepha ngalinye lewebhu
Fumana izicwangciso zakho ezikufutshane kunye nokudibanisa
Iifayile zakho zifakwe kwiimpawu ze-hreflang
Masithathe iindawo ezenziwe ngokukodwa-ukubeka indawo kwi-SEO yamazwe ngamazwe ayithethi ukuguqulelwa okulula kwimiqulu yewebhu. Sifanele sijamelane nayo-ukwakha indawo ethembekileyo ithetha ukudala imibhalo yokubambisana eya kuba yinto ehambelana nezo ndawo kunye neendlela zokukhangela. Ndiyathetha ukuba uya kufuneka usebenze uphando oluthile lwegama eliphambili kwilizwe ngalinye othetha nalo. E. g. , ukuba uya kujongana neendawo ezininzi kunye nebhizinisi lakho, ndincoma ukuba unemihlathi eyahlukileyo eyahlukeneyo kwaye, ngokuqinisekileyo, umxholo ohlukeneyo ukuze bafumane ukubonakala okungcono kwendawo, kunye neendawo ezipheleleyo ze-injini.
Ungalokothi uhlawule ukuhlawula ixesha lakho kunye nemizamo yokudibanisa izicwangciso zakho zokuzilungelelanisa umhlaba jikelele, wendawo, kunye neziphathekayo kwisicwangciso seSET seSicwangciso seNational international effective. Ndiyacetyiswa ukuba nokwenza uluhlu lwezinto eziphambili, ukuqala ngalawo mazwe anakho amathuba okubonelela abathengi abaninzi abanokukhangela kwi-niche yakho yemarike.Ngokomzekelo, ukuba ukhankanywe kubasebenzisi baseTshayina, ungcono ukuba uqaphele ukuba ngaphezu kwe-95% yabasebenzisi be-intanethi bahlala kwi-intanethi ngeekhompyutha eziphathekayo. Yingakho iimveliso ezifuna ukuphumelela ukhuphiswano kufuneka zibe nomxholo wazo ngokufanelekileyo ngokumalunga nokuphendula.
Ekugqibeleni, ungalokothi ukhohlwe ukulinganisa iziphumo zesicwangciso sakho se-SEO sakho samanye amazwe ngokujonga ngokulandelelanisa ukusebenza kwakho kwangoku. Yenza i-check-check for all metrics yakho kwingingqi nganye ejoliswe kuyo rhoqo rhoqo. Njalo ukhumbule ukulandelela i-rankings yakho, kunye nokuqinisekisa ukuba iphepha lakho lewebhu libeka ngokuchanekileyo kwilizwe ngalinye okanye kwingingqi. Emva kwakho konke, ungaziva unamahloni okusebenzisa amandla aphezulu ePPC ukwandisa kwiimarike ezintsha. Ukusebenzisa ngokufanelekileyo iPPC kwisicwangciso sakho se-SEO esisemhlabeni wonke kuya kukunceda ukuba uqondwe ngcono ukuziphatha kwendawo, ukuguquka kweendlela, kunye nokufumana ukulungeleka kangcono kwilizwe elitsha.